Atsaharo ny fanavaozana mandeha ho azy ao amin'ny iOS 7 | Vaovao IPhone
Vaovao farany amin'ny tanana iOS7 ny fampiharana
Apple miaraka amin'ity iOS 7 vaovao ity dia mitondra antsika a endri-javatra mampandefitra izay ny safidy an'ny fanavaozana ny fampiharana fampidinana avy amin'ny App Store ho azy, noho izany dia hialantsika ny fananana ny kisary manamarika ny fanavaozana ny kisary App Store toy ny nitranga hatramin'izao fa mazava ho azy fa tsy dia tsara tarehy loatra ny zava-drehetra nanomboka tamin'ity mitaky vidin'ny bateria fanampiny izany.
Eto izahay dia mitondra mpitari-dalana hafa hahafahantsika manatsara kely kokoa ny ain'ny baterinao, Ity torolàlana ity dia ahitana ny fampianarana anao alefaso ny fanavaozana amin'ireo rindranasa avy amin'ny appstore iOS 7 Beta 2 ka mandany bateria kely kokoa noho ny tsy fitadiavana fanavaozana isaky ny roa na telo.
Betsaka no hilaza fa tsara kokoa ny mampavitrika ireo fanavaozam-baovao ary noho izany dia aza manahy ny hanao izany amin'ny tanana ianao na dia mihinana bateria ambony kokoa aza ny hafa ary hilaza ny hafa fa tsara kokoa ny hanafoanana azy ireo mba haharitra kely kokoa ny bateria, miankina amin'ny zava-drehetra amin'ny fampiasana omenao ny fitaovanao sy ny zavatra mety anananao hampifandray azy io mba handoavanao vola.
Eto izahay dia mandeha miaraka amin'ilay torolàlana mini satria izy ireo dia dingana mora be tokoa:
1- Miditra amin'ny Fikirana ny fitaovantsika.
2-Midina amin'izay lazainy isika Fivarotana iTunes sy App Store ary tsindrio izany.
3- Izahay dia mitady ilay faritra voalaza ao Fampidinana mandeha ho azy ary hesorinay ny safidy vaovao farany.
Fanatanterahana ireo tsotra dingana ny bateria hitazona antsika zavatra bebe kokoa fotoana fa tsy maintsy havaozintsika ihany ny fanavaozana toy ny nataontsika hatrizay.
Izaho manokana ary ankehitriny fa eo am-pamitana beta ity iOS vaovao ity dia mamporisika ny hanafoanana an'io safidy vaovao io aho na dia nanomboka ny beta 1 ka hatramin'ny beta 2 aza dia nihena ny fihinanana bateria, mbola misy fanjifàna somary avo ihany koa, manoloana ny serivisy bebe kokoa azontsika atao ny mamono ilay fotoana lava kokoa. haharitra bateria ao aminay amin'ny betas. Ankoatry ny famonoana ity serivisy ity dia mitondra ny safidy fampidinana mandeha ho azy ho an'ny mozika, rindranasa ary boky koa aho.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Vaovao farany amin'ny tanana iOS7 ny fampiharana
Carlos, Tabasco, Mx dia hoy izy:
Na ahoana na ahoana, ny fampidinana mandeha ho azy dia tsy mandeha amin'ny angona finday, farafaharatsiny mba ho ahy, amin'ny alàlan'ny wifi fotsiny dia ho tsara kokoa ny fiasa amin'ny alàlan'ny angona finday. Ny sisa ataony dia avelao ho kilemaina ny fampiharana, mijanona "miandry" izy ary tsy manao na inona na inona. Tsy maintsy najanoko noho izany fotsiny.
Valiny tamin'i Carlos, Tabasco, Mx
indiana99 dia hoy izy:
Ho an'ireo izay megabytes kely fotsiny, indrindra amin'ny faran'ny tsingerina, ny fisintomana ireo fanavaozana ho azy dia afaka mamela antsika ho henjana amin'izany lafiny izany, raha toa kosa ka azo sintonina amin'ny tanana izy ireo rehefa mody na aiza na aiza ananantsika manana wifi, ary ireo megabytes fanampiny ireo dia tsy very maina.
Valiny amin'ny indio99
discober dia hoy izy:
Ny fikarohana dia tokony hanao zavatra mitovy amin'ny ankehitriny, na ny fanavaozana mandeha ho azy dia alefa na tsia. Ary mazàna dia havaozina izy io rehefa ao amin'ny Wi-Fi ny iPhone ary mamaly. Inona koa, amin'ny toe-javatra sasany dia handany bateria bebe kokoa amin'ny fanavaozana ny tanana izy io noho ny tsy maintsy hamonoana ny efijery.
Mamaly an'i discober
Belle dia hoy izy:
Tsy manadino fa misy fanavaozana tena ratsy ka tsy te-hanavao ianao fa avelao ny kinova izay anananao izao. Ka ny fanesorana ilay mandeha ho azy dia zavatra tsara be. Ho ahy kely momba ny fametrahana ny mandeha ho azy fa misaotra azy ireo fa azo foanana izy ireo. Tsy adino ny manakana antso na hafatra, izay hitako fa tsy mitombina!
Valiny tamin'i Belle
Space +, manorata habaka marobe amin'ny alàlan'ny fanindriana ny lakilen'ny habaka
Ahoana ny fizarana rakitra amin'ny alàlan'ny AirDrop ao amin'ny iOS 7